Logitech Harmony Elite Review - News Fitsipika
Ny Logitech Harmony Elite no tsara indrindra no ataovy-it-lavitra rehetra azo vidim-bola. Tsy manana fahadisoana vitsivitsy ary izay misy dia tokony ho nidina ho any amin'ny fitaovana ianao miezaka ny hifehy fa tsy ny lavitra aza, tahaka ny nitranga tamin'ny PS4.
From an-trano fialam-boly sy ny Wireless miteny ny jiro, thermostats, Sela Mpandray Hafanana, fanairana sy ny maro hafa, izao no lavitra iray mba hanapaka azy rehetra - ho tsara tarehy vidiny
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Logitech Harmony Elite famerenana: mora ampiasaina mitokana izay mitaky anjara-raharaha ny amin'ny trano” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 4 Aprily 2016 06.00 UTC
Ny Logitech Harmony Elite no iray lavitra mba hanapaka azy rehetra, avy amin'ny TV, nametraka-tampon'ny boaty ary hampionona ny jiro, thermostat, Wireless mpandahateny sy ny Internet-mifandray Sela Mpandray Hafanana, Ho mifehy azy ny loka.
Logitech dia manana tantara lava be ny manao tsara rehetra izao remotes izay tsy afaka mifehy ihany no fitaovana IR rehetra eo anoloan'ny ny fahitalavitra, fa koa mamela anao hanao remotes noho ny fomba amam-panao mifehy ny ekipa ny fitaovana hafa tamin'izany andro izany.
Ny Harmony Elite no farany tampon'ny isan-karazany manao-it-lavitra rehetra, ny vokatra izay efa nifindra tany an-dafin'i fialam-boly fotsiny ny foibe, ary te hifehy ny trano manontolo.
Ny Elite amin'ny mamaly ny Dock ny Harmony Hub ho amin'ny ankavanana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Misy zavatra telo ho amin'ny Logitech Harmony Elite. Manana ny toerana mitokana, ny Hub sy ny fampiharana.
Izany no iray amin'ireo tsara indrindra natao, aina indrindra ny mampiasa remotes efa nanana ny fahafinaretana mba hanao. Misy remotes ho an'ny fampisehoana ary misy remotes ho an'ny fampiasana, Ary izao no farany.
Dia mora ny tonga ny bokotra rehetra, ary manana tsara, manaiky hahatsapa ho azy ireo. Ny mitokana manana heft ho izany nefa tsy mavesatra sy ny malemilemy-mafy indray mahatonga azy mora ny mihazona hatrany. Izany rehetra izany dia tokony ho nomena ho lavitra niaritra araka ny fahitalavitra, fa vahaolana hafa niaritra toy izany koa vola lany amin'ny ambaratonga fototra ity.
Ny ambony ampahatelon'ny Elite dia 2.4in mifidy loko touchscreen ho fitaovana, fisafidianana toerana tena fantsona na fiaraha-mientana, na ny fametrahana eny fanao didy izay tsy maintsy ara-batana bokotra.
Ny mitokana manana ny mamaly ny Dock ho izay slots rehefa tsy ampiasaina, fa haharitra tsara herinandro eo ho eo izany fiampangana Raha maniry.
Ny fampiharana Harmony mahatonga fametrahana ny lavitra avy amin'ny smartphone tsotra, nitarika dingana-by-dingana dingana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Fananganana ny lavitra koa iray amin'ireo rafitra mora indrindra aho amin'ny rehetra izao efa alalan'ny remotes, fa tsy azo atao ao amin'ny Elite ihany.
Setup mitaky ny Android na iOS fitaovana, na ny solosaina. Ny Harmony rindrambaiko mametraka ny kaonty sy ny mpampiasa manampy hoe fitaovana. Izany koa dia mitarika mpampiasa amin'ny alalan'ny fametrahana asa toy ny hoe "Watch TV" famelana lavitra iray mba hamindra ny fitaovana amin'ny, fiovana fantsona amin'ny zanabolana boaty, hanitsy ny hamafin'ny feonao mampiasa ny DIEM sy hanova sary fombafomba eo amin'ny TV.
Rehetra tokony ho fantatrao no miezaka ianao mba hametraka azy amin'ny, anisan'izany ny modely isan'ny raha azo ampiharina. Tao anatin'ny fito minitra aho setup enina fitaovana sy dimy asa dia vonona ny handeha.
Hazavao fa na aiza na aiza
Ny mitokana mifandray amin'ny Hub wirelessly, izay dia notantarain'ilay ny didiny ho amin'ny fitaovana, izany hoe ny faritra lavitra nanondro azo ampiasaina na aiza na aiza, na ao amin'ny efitrano iray hafa. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Elite mifandray amin'ny Harmony Hub, izay kosa nipoaka avy didy ny fitaovana isan-karazany amin'ny alalan'ny infrared, Wi-Fi na Bluetooth, handefasana no takina.
The Hub dia avy amin'ny roa IR blasters izay azo plugged an-indray mba hanitatra ny dian-tongotra ny ny nandefa fahaizana, izay mahasoa raha manana enta-mavesatra ny fitaovana nafenina ao amin'ny cupboard.
Izany dia midika hoe tsy voatery manoro ny lavitra na inona na inona manokana tari-dalana sy ny valiny dia fifadian-kanina – haingana be noho ny teo aloha Ira-monina Logitech Harmony remotes.
Ny Elite dia zaraina ho roa ankapobeny asa: "Fiaraha-mientana", izay Mitambatra fitaovana sy ny zavatra nataony ho eo an iray lavitra; ary ny fitaovana, izay lisitry avy ny fitaovana rehetra tsirairay amin'ny fifehezana tanteraka ny asa rehetra.
Ny fampiharana finday avo lenta miasa ihany koa ho toy ny feno lavitra, miaraka amin'ny boky bokotra ho afaka hifehy ny TV ny boky, ohatra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Hit "TV Watch" eo amin'ny touchscreen ohatra, Ary Ho hiverina amin'ny zavatra rehetra ilaina ho an'ny mijery tele, ary hametraka ny fanombohana fantsona. Ho ahy izany ny AMP, ny zanabolana boaty sy ny TV, rehetra teo amin'ny ankavanana sy ny fomba mandeha ho azy fahan'ny. Avy eo aho dia mahazo ny fomba amam-panao lavitra mba hanova boky amin'ny MBC, mifamadika fantsona amin'ny zanabolana boaty sy hampavitrika sary-in-sary miaraka amin'ny TV.
Raha te-Ampifamadiho ny Amazon Fire TV, Dia nikapoka ny bokotra ary Switches ny torohevitra eo amin'ny MBC, Switches eny boaty ny zanabolana ary eny izahay.
Raha vao ianao nanao tamin'ny filokana, tsindrio ny bokotra vita fanoloran-tena eny an-tena tampon'ny faritra lavitra sy tsy mikarakara ny sisa.
Tamin'ny roa volana mahery mampiasa izany aho mba hanana azy io mbola tsy miverina amin'ny zavatra na mampihetsika ny fomba tsara, fa misy manampy bokotra mba manamboatra zavatra diso raha mandeha amin'ny fanasokajiana amin'ny alalan'ny inona no tsy eo, na marina teo.
Rehetra ny hetsika ihany koa dia tanterahina amin'ny alalan'ny fampiharana ny Harmony lavitra eo amin'ny misy Android na iOS fitaovana, izay midika hoe ny hafa ao amin'ny efitrano tsy mba manana ny mitokana mba hanova ny fantsona. Na izany no ho zavatra tsara na ny ratsy zavatra mitoetra eo amin'ny fihetsehana ny efitra fandraisam-bahiny.
Afaka mifehy ny mitokana isan-karazany aterineto ny zavatra fitaovana, anisan'izany ny akaniny thermostat manan-tsaina sy misy fitaovana mifandray amin'ny SmartThings rafitra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Harmony Elite dia ny ho tsara lavitra toy ny rehetra izao afaka mahazo, fa mahazo be mahaliana kokoa rehefa manomboka ahitana ny aterineto-mifandray fitaovana ao an-tokantranonao.
Tsy misy fanahafana, ny Harmony Hub dia afaka mifehy ny manan-tsaina an-trano an-jatony fitaovana avy amin'ny jiro ny thermostats ny fitenenana.
Ohatra, na inona na inona voaendrika amin'ny Ny SmartThings Samsung Hub dia tsy azo fehezina amin'ny fampiasana ny Harmony. Afaka miato kely, milalao, dinganina lalany ary hanitsiana ny boky ny Sonos mpiteny. Afaka mijery ny toetry ny fanatrehanao, hafanana, asa na ny rano Sela Mpandray Hafanana.
Ho na dia mampahafantatra anao ny akaninao eny manan-tsaina, raha miditra izy thermostat fomba satria tsy sada anao amin'ny fony, raha toa ianao mampiasa ny Elite pahavitrihana tamin'ny fotoana, mamela anao hamelona izany indray ary manitsy ny mari-pana raha tianao.
Tsy vitan'ny hoe afaka ireo fitaovana azo fehezina tsirairay, fa izy ireo dia mitambatra koa ho fiaraha-mientana. Afaka miala daholo ny jiro ao an-trano amin'ny bokotra iray, na afaka pahina ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-bahiny ny ihany no fanilo tany an-jorony, rehefa ara amin'ny TV.
Be dia be ny mety ny aterineto ny zavatra tena mameno ny manodidina fitaovana mahay manao asa ara-potoana. Fa rehefa te miteraka asa tsara iray minitra ity, fa matetika ny raharaha ny nandavaka avy smartphone, pamatrarana ny rindrambaiko sy ny mikapoka ny bokotra.
Ny Elite manaisotra fa rummaging, na nametraka azy ao anatin'ny iray lavitra rehetra, fampiharana amin'ny finday.
Ny mitokana maharitra manodidina ny herinandro ny hariva fampiasana isan-poana, na afaka fotsiny havela amin'ny Dock alina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Izay mandiso fanantenana zavatra efa hita aho amin'ny Elite dia sy ny fanaraha-maso ny Sony ny PlayStation 4. Ny PS4 manao ny haino aman-jery lehibe mpilalao sy raha afaka mifehy ny Elite lafiny sasany izany, ny faritra lavitra tsy afa-mandà ny PS4, tsy afaka mifehy ny Netflix playback na ny potika hafa. Ihany koa dia tsy hampiakatra azy hiala, ihany no mametraka azy ho ao an-tory rehefa namely ny hery bokotra.
Logitech manameloka Sony noho izany, izay Mamerimberina hatrany fa ny Kilonga mpamily foana ny maso ny PS4, hampisy ny haino aman-jery lousy traikefa.
Mora kokoa noho Te-nahy namely ny bokotra eo amin'ny touchscreen, rehefa maka ireo avy lavitra ny ambony seza
Fantsona favoris manala ny tokony handeha fihazana ao amin'ny Torolalana ho an'ny BBC amin'ny HD iray isaky ny
Miezaka mifehy Sonos tsiroaroa ny mpandahateny iray dia mifarana amin'ny hoe avadika na midina ihany, tsy izy roa
Afaka mandefa ny Elite IR no mandidy mivantana, raha toa ka mila izany, izay mahatonga azy mora kokoa ny controll zava-efitra hafa
Ny mamirapiratra mainty Hub dia vovoka andriamby
Ny Logitech Harmony Elite no an-tampon-lavitra isan-karazany avy ao amin'ny orinasa, niaritra £ 280. The Hub dia azo novidina amin'ny fotoany avy izy noho ny fampiasana amin'ny smartphone for £ 100 na amin'ny varavarana lamba-tsy lavitra for £ 120, izay tsara sarobidy, fa tsy ho toy ny zava-drehetra mety tsy azo atao avy amin'ny faritra lavitra.
Ny olana lehibe indrindra dia ny vidiny: dia tena lafo ny lavitra. Logitech ny Harmony Hub no toerana tena hery ao anatintsika ny lainga, sy ny fahaizany mifehy tsara tarehy be na inona na inona, ary lasa sehatra ho an'ny IoT fitaovana. Mifehy ny fialam-boly an-trano ihany no mandreraka amin'ny smartphone, na izany aza, tahaka ny tsy hanoto bokotra iray hatao ny asa nataony sy foana mihoatra maka tianao.
Ho an'ireo izay sosotra noho ny plethora ny remotes nipetraka teo amin'ny latabatra, ary ny kafe te zavatra izay miasa fotsiny, dia ny Elite mendrika ny vidin'ny fidirana.
Mahatsara: mifehy saika ny zava-drehetra, tsy MANAN-TANTARA-of-imasony ilaina, mora ny nanangana ny fampiharana, atao ihany koa ny mampiasa ny fampiharana mba hifehy, IoT fampidirana, ergonomic
Maharatsy ny mifampiresaka: lafo, somary mora ny nahy tsindrio ny bokotra amin'ny touchscreen, rehefa maka ireo faritra lavitra, setup tsy azo atao mivantana amin'ny mitokana
Ny indray ny Hub dia manana ny fahefana ny faladiany microUSB, faladia roa for IR blasters sy Reset ny bokotra mandeha ny zavatra rehetra diso dia tokony. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Apps, Article, Gadgets, Internet-javatra, Finday, Playstation 4, Famerenana, Samuel Gibbs, Smart trano, Smart metatra, Smartphone, Sony, Teknolojia, televiziona, TV mivantana
← Sivy mahakivy indrindra fahadisoana rehetra Video Game Players ho Huawei Namoaka Ny P9 sy P9 Plus finday mba Raiso ny iPhone sy ny Vondron-kintana →